Homeसमाचारयी हुन्: खाली पेटमा खान नहुने कुराहरू..खाएमा हुन्छन् यस्ता गम्भी’र समस्या !
October 2, 2020 admin समाचार 11343
स्वस्थ जीव’नका लागि सही स’मयमा सही चिजको सेवन आ’वश्यक हुन्छ । मा’निसको स्वास्थ्य उसको खानपा’नमा निर्भर रहन्छ ।
खान’पान स्वच्छ, पौष्टिक र ठिक्क मात्रा’मा खाए यसले लाभ पुर्या’उँछ । तर कतिपय अवस्था’मा भने कुन सम’यमा के खाने र के नखाने भन्ने बिषयको जान’कारी समेत आवश्यक हुन्छ । आज हामी खाली पेटमा खान नहुने चीज’बारे जानकारी दिदैछौं ।
टमाट’रमा पर्याप्त मा’त्रामा भिटामिन र एन्टि’असिक्डेन्ट भरपूर मात्रामा पाइन्छ । तर यसलाई खाली पेट’मा खायो भने एसिडि’कका कारण पेटमा नकार’त्मक असर पर्न जान्छ । जसले पेट दुख्ने समस्या हुन सक्छ । अझ अल्सर पीडि’तका निम्ती खाली पेटमा टमाटरको सेवन हानि’कारक हुन्छ ।
२. अमि’लो फल
भिटामिन सी, फाइ’बर र एन्टि’अक्डिेन्ट पाइने अमिलो फल जस्तै सुन्तला, अंगुर, अमिलो लगा’यतका फलको सेवन खाली पेटमा हानिकार हुन्छ । यसले पेट दुख्ने सम’स्या हुन सक्छ ।
बिहान खाली पेटमा खा’जामा पफ वा पेस्ट्री खानु हुदैन । यसमा एक कि’सिमको ढुसी हुन्छ । जसले खाली पेटमा हामी’लाई दुःख दिन सक्छ ।
५. पेय प’दार्थ
चिसो पेय पदार्थ त्यसै पनि श’रीरका लागि लाभदा’यक मानिँदैन । अझ बिहा’नीको खाली पेटमा यसको सेवन झनै खतरनाक हुन्छ । बिहान उठ्ने बित्तिकै कार्बोनेटेड ड्रि’क्स पिएमा क्या’न्सर तथा मुटुका बिरामीलाई अस’र पार्दछ ।-खबरहब बाट
December 22, 2020 admin समाचार 6882
August 31, 2021 admin समाचार 4529
April 17, 2021 admin समाचार 4246
‘दि भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–३’ को ब्लाइन्ड अडि`सन सुरु भएको छ । नेपा’लको नम्बर एक गायन रिया’लिटी शोको रुपमा स्थापित भइसकेको ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’ हिमा`लय टेलिभिज`नले उत्पादन र प्रसा’रण गर्दै आएको छ । नेपाली